based - Synonyms of based | Antonyms of based | Definition of based | Example of based | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for based
Top 30 analogous words or synonyms for based
Windows 98 boot stage မှာ MS-DOS based ဖြစ်သည်။
Windows 95 ယင်းသည် ယခင်က DOS-based Windows ထုတ်ကုန်များကို သိသိသာသာ မွမ်းမံထားသည်။
ဆေးဝါးဗေဒ 42. Artemisinin-based combination therapy (ACT) ငှက်ဖျားအပြင်းစားအတွက် (အာတီမစ်စင်နင်) ပါသည့် ဆေးအတွဲများ၊
ဆေးဝါးဗေဒ 415. Selenium sulfide (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ = deterent-based suspension 2%
ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ The Canadian Arrow,acompetitor for the Ansari X Prize, was based on the aerodynamic design of the V-2.
အို (အက္ခရာ) and all encodings based on ASCII, including the DOS, Windows, ISO-8859 and Macintosh families of encodings.
ဆေးပညာ ဆေးပညာယူဆချက်များမှာလည်း အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံသည့် ဆေးပညာ (Evidence-based Medicine) အဖြစ် ကူးပြောင်းလာပြီး၊ တကမ္ဘာလုံးတလျောက် အချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း တို့ဖြင့် ဆေးပညာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ The development of the proximity fuze and of centimetric,3gigahertz frequency gun-laying radars based on the cavity magnetron helped to counter the V-1's high speed and small size. In 1944, Bell Labs started delivery of an anti-aircraft predictor fire-control system based on an analog computer, just in time for the Allied invasion of Europe.
ဆိုယုဇ်အာကာသယာဉ် ဆိုယုဇ်အာကာသယာဉ်ကို ရုရှားတို့၏အားအကိုးရဆုံးသော၊ မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသောဆိုယုဇ်ဒုံးပျံဖြင့်ပစ်လွှတ်သည်။ The Soyuz rocket design is based on the Vostok launcher, which in turn was based on the 8K74 or R-7A Semyorka,aSoviet intercontinental ballistic missile. Soyuz spacecraft are launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan.